Olana tamin’ny laza adina malagasy :: Mety hahazo naoty fanampiny maimaim-poana ireo mpiadina BEPC • AoRaha
Olana tamin’ny laza adina malagasy Mety hahazo naoty fanampiny maimaim-poana ireo mpiadina BEPC
Azo heverina no hahazoan’ny mpiadina amin’ny fanadinam-panjakana BEPC naoty fanampiny maimaim-poana noho ny fahadisoan’ny laza adina tamin’ny taranja Malagasy. Tsy fahatomombanana teo amin’ny fanontaniana sasany mikasika ny fitsipika sy ny hevi-teny no mety hisian’io tombony amin’ny isa io.
“Efa misy ny vaomiera mandinika ny tranga toy ireny, mialoha ny hitsarana an’ireo taratasim-panadinana. Azo heverina ny hahalasa azy ireny ho naoty fanampiny satria tsy olana avy amin’ny mpianatra no nahatonga azy”, hoy ny fanazavan-dRanoroaliravaka Zoelifara, lefitra ara-pedagojika eo anivon’ny Fari-piadidiam-pampianarana Antananarivo renivohitra, omaly. Notsindriany fa tranga miseho ny fahadisoana amin’ny laza adina na efa nandalo dingana maro aza ny famolavolana azy.
Sarotra ny kajy
Toy ny tamin’ny fanadinana andrana dia anisan’ny taranja sarotra ho an’ny mpiadina ny kajy natrehan’ireo mpianatra omaly maraina. “Tena sarotra ny kajy. Saika nifamadika amin’ny fanazarantena nataonay tany an-tsekoly ny ankamaroan’ny fanontaniana”, hoy ny mpiadina sasany teny amin’ny CEG Antanimena sy teny amin’ny Lisea LMA Ampefiloha.
Marihina fa rahampitso no hifarana ny fanadinam-panjakana BEPC ho an’ireo mpiadina ao anatin’ny Sokajy A, izay manao ny tenim-pirenena anglisy. Ny Tantara sy Jeografia sy Fizika kosa no taranja hatrehin’izy ireo anio.
Araka ny fanampim-panazavana voaray, miisa telopolo sy telonjato sy arivo tamin’ireo mpiadina manodidina ny fitopolo sy dimanjato sy fito arivo sy roa alina voasoratra anarana teto amin’ny Cisco Antananarivo no tsy tonga niatrika ny taranja matematika, omaly .
Literatiora am-bava sy haisary :: Aseho an-tsary etsy Antsahavola ireo ohabolana malagasy